မိန်းကလေးတွေေ မိန်းမကိုယ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး လွဲမှားနေတဲ့ အပြုအမူများ - For her Myanmar
မိန်းကလေးတွေေ မိန်းမကိုယ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး လွဲမှားနေတဲ့ အပြုအမူများ
လုံးဝ…. လုံးဝ…. မလုပ်သင့်တာပါနော်…
ယောင်းတို့ရေ … မိန်းမကိုယ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အနူးညံ့ဆုံးအစိတ်အပိုင်းပါ။ မိန်းမကိုယ်သန့်ရှင်းမှုမရှိရင် ပြင်ပက ရောဂါပိုးတွေဝင်လာနိုင်သလို မိန်းမကိုယ်သန့်ရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေမှားနေရင်လည်း ရောဂါပိုးတွေ ဝင်ရောက်ပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တချို့သော အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ မှားယွင်းပြီး ပြုမူတတ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
(၁) အနံ့ပါတဲ့ ဆပ်ပြာတွေ ရေမွှေးတွေ အသုံးပြုခြင်း
မိန်းမကိုယ်က အနံ့ဆိုးကို ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာခဲ၊ ဆပ်ပြာရည်နဲ့ ရေမွှေးတွေသုံးတာမျိုးတွေ ဒါတွေကို တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပေမဲ့ မိန်းမကိုယ်ကို ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ သာမန်ဆပ်ပြာတွေဟာ မိန်းမကိုယ်မှာ ရှိသင့်တဲ့ pH balance ကို ကမောက်ကမဖြစ်စေပြီး ရောဂါပိုးဝင်စေပါတယ်။ အနံ့ဆိုးတွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးကာကွယ်မှုနဲ့ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ pH Level5ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် pH Care လိုမျိုး ကျန်းမာရေးအာမခံချက်ရှိတဲ့ မိန်းမကိုယ်ဆေးကြောဖို့ သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆေးရည်မျိုးကို သုံးသင့်ပါတယ်။
(၂) ကျပ်လွန်းသည့် အတွင်းခံများ ဝတ်ဆင်ခြင်း
အတွင်းခံတွေက ယောင်းကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အရမ်းကျပ်တဲ့အတွင်းခံတွေက မိန်းမကိုယ်နဲ့ ပွတ်တိုက်မှုများတဲ့အခါ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ကျပ်လွန်းတဲ့အခါ အပူဓာတ်တွေနဲ့ ချွေးတွေလာစုပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ဖွားနိုင်တာကြောင့် ပိုးဝင်တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နော်။
(၃) ကြားဖူးနားဝနည်းလမ်းမျိုးဖြင့် မိန်းမကိုယ်ကျဉ်းအောင်လုပ်ခြင်း
ဒါကတော့ အိမ်ထောင်သည်ယောင်းတွေမှာ အဖြစ်များတတ်တဲ့ကိစ္စပါ။ ခင်ပွန်းသည်ကို ကာမသုခခံစားနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မိန်းမကိုယ်ပြန်ကျဉ်းအောင် ကျောက်ချဉ်စိမ်တာမျိုးတွေ၊ ဈေးကွက်ထဲက မိန်းမကိုယ်ကျဉ်းတယ်ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းဝယ်ထည့်တာမျိုးတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်လို နူးညံ့ပြီး အရေးကြီးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက် အာမခံချက်မရှိတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးတွေ အသုံးပြုတာဟာ အန္တရာယ်များလွန်းပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်အထိပါ စိုးရိမ်ရတဲ့ ကိစ္စမျိုးမို့ လုံးဝကို ရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။
(၄) ဆေးခန်းသွားရန် ရှက်ကြောက်ခြင်း
မိန်းမကိုယ်က တစ်ခါတလေ အဖြူဆင်းတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးအဖြူဆင်းတာဆိုကိစ္စမရှိပေမဲ့ ယားယံတာ ရောင်ရမ်းတာတွေနဲ့ အခြားအရောင်တွေ ဆင်းရင်တော့ မပေါ့ဆသင့်တော့ဘဲ တတ်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြသင့်ပါပြီ။ မြန်မာမိန်းကလေးအများစုက မိန်းမကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆေးခန်းပြရမယ်ဆို တွန့်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် Stella ပြောချင်တာကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးခန်းပြရတာရှက်စရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဆေးခန်းမပြဘဲ ဒီတိုင်းထားလိုက်ရင် ရောဂါပိုးဝင်ပြီး ပိုဆိုးရုံပဲ ရှိမှာမို့ ယောင်းရဲ့မိန်းမကိုယ်မှာ မူမမှန်တာ သတိထားမိတယ်ဆိုရင် ဆေးခန်းသွားပြဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။
Related Article >>> ညီမလေးတို့ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ လိင်အင်္ဂါ ရေယုန်အကြောင်း
ဒီအချက်တွေက အခုထက်ထိတိုင် တချို့အမျိုးသမီးတွေ လုပ်မိနေဆဲမို့ ထပ်မံ အသိပေးလိုက်ရခြင်းပါနော်။
မိန်းမကိုယ်ကျန်းမာရေးဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရမ်းကိုအရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍမို့ အထူးဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း…
လုံးဝ…. လုံးဝ…. မလုပျသငျ့တာပါနျော…
ယောငျးတို့ရေ … မိနျးမကိုယျဆိုတာ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ ကိုယျခန်ဓာမှာ အနူးညံ့ဆုံးအစိတျအပိုငျးပါ။ မိနျးမကိုယျသနျ့ရှငျးမှုမရှိရငျ ပွငျပက ရောဂါပိုးတှဝေငျလာနိုငျသလို မိနျးမကိုယျသနျ့ရှငျးတဲ့ နညျးလမျးတှမှေားနရေငျလညျး ရောဂါပိုးတှေ ဝငျရောကျပွီး မလိုလားအပျတဲ့ပွဿနာတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး တခြို့သော အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ မှားယှငျးပွီး ပွုမူတတျတဲ့ ကိစ်စမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။
(၁) အနံ့ပါတဲ့ ဆပျပွာတှေ ရမှေေးတှေ အသုံးပွုခွငျး
မိနျးမကိုယျက အနံ့ဆိုးကို ဖုံးကှယျဖို့အတှကျဆိုပွီး ကိုယျတိုကျဆပျပွာခဲ၊ ဆပျပွာရညျနဲ့ ရမှေေးတှသေုံးတာမြိုးတှေ ဒါတှကေို တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးအတှကျ အသုံးပွုနိုငျပမေဲ့ မိနျးမကိုယျကို ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ သာမနျဆပျပွာတှဟော မိနျးမကိုယျမှာ ရှိသငျ့တဲ့ pH balance ကို ကမောကျကမဖွဈစပွေီး ရောဂါပိုးဝငျစပေါတယျ။ အနံ့ဆိုးတှနေဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးကာကှယျမှုနဲ့ မိနျးမကိုယျရဲ့ လိုအပျတဲ့ pH Level5ကိုထိနျးသိမျးနိုငျဖို့အတှကျ pH Care လိုမြိုး ကနျြးမာရေးအာမခံခကျြရှိတဲ့ မိနျးမကိုယျဆေးကွောဖို့ သီးသနျ့ထုတျလုပျထားတဲ့ ဆေးရညျမြိုးကို သုံးသငျ့ပါတယျ။
(၂) ကပျြလှနျးသညျ့ အတှငျးခံမြား ဝတျဆငျခွငျး
အတှငျးခံတှကေ ယောငျးကို သကျတောငျ့သကျသာဖွဈစတောမြိုးပဲ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ အရမျးကပျြတဲ့အတှငျးခံတှကေ မိနျးမကိုယျနဲ့ ပှတျတိုကျမှုမြားတဲ့အခါ ရောငျရမျးခွငျးတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ ကပျြလှနျးတဲ့အခါ အပူဓာတျတှနေဲ့ ခြှေးတှလောစုပွီး ဘကျတီးရီးယားတှေ ပေါကျဖှားနိုငျတာကွောငျ့ ပိုးဝငျတာမြိုးတှလေညျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျနျော။
(၃) ကွားဖူးနားဝနညျးလမျးမြိုးဖွငျ့ မိနျးမကိုယျကဉျြးအောငျလုပျခွငျး
ဒါကတော့ အိမျထောငျသညျယောငျးတှမှော အဖွဈမြားတတျတဲ့ကိစ်စပါ။ ခငျပှနျးသညျကို ကာမသုခခံစားနိုငျအောငျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ မိနျးမကိုယျပွနျကဉျြးအောငျ ကြောကျခဉျြစိမျတာမြိုးတှေ၊ ဈေးကှကျထဲက မိနျးမကိုယျကဉျြးတယျဆိုတဲ့ ပစ်စညျးဝယျထညျ့တာမြိုးတှေ လုပျတတျကွပါတယျ။ မိနျးမကိုယျလို နူးညံ့ပွီး အရေးကွီးတဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတဈခုအတှကျ အာမခံခကျြမရှိတဲ့ ပစ်စညျးမြိုးတှေ အသုံးပွုတာဟာ အန်တရာယျမြားလှနျးပါတယျ။ အသကျအန်တရာယျအထိပါ စိုးရိမျရတဲ့ ကိစ်စမြိုးမို့ လုံးဝကို ရှောငျကဉျြသငျ့တဲ့ ကိစ်စပါ။
(၄) ဆေးခနျးသှားရနျ ရှကျကွောကျခွငျး
မိနျးမကိုယျက တဈခါတလေ အဖွူဆငျးတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ ရိုးရိုးအဖွူဆငျးတာဆိုကိစ်စမရှိပမေဲ့ ယားယံတာ ရောငျရမျးတာတှနေဲ့ အခွားအရောငျတှေ ဆငျးရငျတော့ မပေါ့ဆသငျ့တော့ဘဲ တတျကြှမျးတဲ့ဆရာဝနျနဲ့ သှားပွသငျ့ပါပွီ။ မွနျမာမိနျးကလေးအမြားစုက မိနျးမကိုယျနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆေးခနျးပွရမယျဆို တှနျ့သှားတတျပါတယျ။ ဒီအတှကျ Stella ပွောခငျြတာကတော့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ဆေးခနျးပွရတာရှကျစရာတဈခုမဟုတျဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဆေးခနျးမပွဘဲ ဒီတိုငျးထားလိုကျရငျ ရောဂါပိုးဝငျပွီး ပိုဆိုးရုံပဲ ရှိမှာမို့ ယောငျးရဲ့မိနျးမကိုယျမှာ မူမမှနျတာ သတိထားမိတယျဆိုရငျ ဆေးခနျးသှားပွဖို့ ဝနျမလေးပါနဲ့။
Related Article >>> ညီမလေးတို့ မဖွဈမနေ သိထားသငျ့တဲ့ လိငျအင်ျဂါ ရယေုနျအကွောငျး
ဒီအခကျြတှကေ အခုထကျထိတိုငျ တခြို့အမြိုးသမီးတှေ လုပျမိနဆေဲမို့ ထပျမံ အသိပေးလိုကျရခွငျးပါနျော။
မိနျးမကိုယျကနျြးမာရေးဟာ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အရမျးကိုအရေးကွီးတဲ့ ကဏ်ဍမို့ အထူးဂရုစိုကျစောငျ့ရှောကျပါလို့ တိုကျတှနျးရငျး…
Tags: do, don't, Health, things, Vagina, women, Wrong